အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပန်းခြံများအတွင်း အခကြေးငွေကောက်ခံ၍ LED မီးထွန်းပွဲတော် ကျင်?? - Yangon Media Group
အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပန်းခြံများအတွင်း အခကြေးငွေကောက်ခံ၍ LED မီးထွန်းပွဲတော် ကျင်??
မကွေး၊ အောက်တိုဘာ ၂၂
အများ ပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မကွေး တိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့လွတ်လပ်ရေးပန်းခြံအတွင်း၌ မိုးကာများဖြင့်ကာရံပြီးကျင်းပနေသည့် LED မီးထွန်းပွဲတော်တွင် ကြည့်ရှု ခအခကြေးငွေကောက်ခံနေမှုအ ပေါ်ပြည်သူများဝေဖန်မှုများရှိနေ ကြောင်း သိရသည်။ ”အခုပွဲကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက် အခကြးငွေနဲ့လုပ်တာလုံးဝအဓိပ္ပာယ် မရှိဘူး။ ငွေကြေးချို့တဲ့ပြီး ဆင်းရဲ တဲ့ပြည်သူတွေကျတော့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခွင့်မရဘူး။ လွတ်လပ်ရေး ပန်းခြံဖြစ်တဲ့အတွက် မိသားစုဝင် ပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာ အပန်း ဖြေဖို့ဖြစ်သင့်တယ်။ လွတ်လပ်ရေး ပန်းခြံဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့မလိုက်ဘူး။ ကန့်ကွက်ပါတယ်”ဟု မကွေးမြို့မှ ဦးနွေဦးကိုကိုက ပြောကြားသည်။
သီတင်းကျွတ်အကြိုအဖြစ် မကွေးမြို့လွတ်လပ်ရေးပန်းခြံအတွင်း၌ LED မီးထွန်းပွဲတော်ကို အောက်တိုဘာ ၂ဝ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ရာ ယင်းပွဲတော်တွင် ဝင်ကြေးအဖြစ်လူကြီးတစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၂ဝဝဝ၊ ငါးနှစ်အထက်ကလေးငယ် တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၁ဝဝဝ နှုန်း ကောက်ယူနေသဖြင့် မကွေးမြို့ခံ ပြည်သူများက ဝေဖန်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ”နိုင်ငံတကာမှာခေတ်စားနေတဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေအတိုင်း အများ ပြည်သူတွေပျော်ရွှင်မှုရအောင် လုပ်ပေးတာပါ။ ဒီထဲမှာ အဓိက အီဖယ်မျှော်စင်၊ တူရိယာအစုံ၊ နေ၊ လ၊ ကလေးကစားကွင်းနင်းခွက်၊ လျှော့စီးနဲ့ဒါန်း၊ LED ထိုင်ခုံများ အပါအဝင် အမျိုးအစားပေါင်း ၃ဝဝ ကျော် ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်”ဟု Love & Joy ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူဦးရဲမြင့်ကပြော ကြားသည်။
အဆိုပါပန်းခြံကို ညအချိန် မီးပွဲတော်ကြည့်ရန်ဝင်ကြေးအ ဖြစ်တောင်းခံနေသည့်အပြင် နေ့ အချိန်များတွင်လည်း အများပြည်သူဝင်၍မရရန်ပိတ်ထားသဖြင့် ပန်း ခြံလာရောက်သူများဝင်ခွင့်မရရှိ ကြောင်း သိရသည်။ ”အခြားမြို့တွေမှာ လူကြီး ကျပ် ၃ဝဝဝ၊ ကလေး ကျပ်၂ဝဝဝ ဝင် ကြေးကောက်ခံတယ်တဲ့၊ တို့မြို့က စီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူး။ ဝင်ကြေး ကောက်ခံတာ ဈေးလျှော့ကောက်ဖို့ ညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့အတွက် အခြားမြို့ တွေထက် ဈေးလျှော့ကောက်ခံတာပါ”ဟု မကွေးမြို့စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖိုးနီက ပြောသည်။ ယင်းပွဲတော်ကို ငွေကျပ် သိန်း ၂ဝဝဝ အကုန်အကျခံကာ LED မီးလုံးပေါင်း အလုံးရေသန်း ၁ဝဝ ခန့် အသုံးပြုကာ ပြသနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့တွင်း၌ မီနီအိုးဝေ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ ကုသိုလ်ဖြစ်ေ?